‘ आन्तरिक र वाह्यि पर्यटक भित्राउनुको विकल्प छैन’:चित्रकला शर्मा भारती – MeroJilla.com
कुश्मा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ५ ले समाजिक काम मात्र नभई वडामा रहेका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण सहित प्रचारप्रसार गर्ने नयाँ कार्यको शुरुवात गरेको छ । यो वडामा पर्यटक भित्राउने पूर्वाधारहरु पर्याप्त छन् । यो वडामा नेपालकै अग्लो र लामो कुस्मा ज्ञादी झोलुङ्गे पुल,वडागाउँ मडिकुवा झोलुङ्गे पुल, वडागाउँ वलेवा मडिकुवा झोलुङ्ग पुल सहित निमार्णधिन बञ्जी जम्प खेल,कुस्मा वलेवा यान्त्रीक पुल,गुप्तेश्प। गुफा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक मठ मन्दिर रहेका छन् । यी सवैको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्न वडाले हाल होडिङ्ग बोर्ड राख्ने लगायतका गतिबिधीहरु सञ्चालन गरेको छ । यसै बिषयमा रहेर वडाध्यक्ष चित्रकला शर्मा भारती संग रामकृष्ण लामिछानेले गरेको कुराकानीको संक्षेप –
१.वडाअध्यक्ष ज्यू प्रचारप्रसारवाट पर्यटक भित्राउन् सकिन्छ ?
– धन्यवाद ! र्हेनुहोस् कुस्माको चिनारी लामा अग्ला पुल,धार्मिक मठमन्दिर निमार्णधिन वञ्जी जम्प,यान्त्रीक पुल रहेका छन् जो वडा नम्बर ५ मा पर्दछन् । यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरु अवलोकन गर्न मानिसहरु आउँने गरेको सवैलाई थाह भएको कुरा हो । कुस्मा सहित पर्वतको चिनारी दिनुपर्ने कर्तव्य तँपाई हाम्रो हो भन्ने लाग्छ । यहाँका अग्ला लामा पुलहरुको अवलोकन गर्न आउँने आन्तरिक तथा वाह्यि पर्यटकलाई वडा भित्र रहेका पूर्वाधारहरुको जानकारी दिनुपर्छ भन्ने होडिङ्ग वोर्ड पुलको वारपार गर्ने ठाउँमा राखेर प्रचारप्रसारको थालनी हामीले गरेका छौं । उनीहरु पुल मात्रै घुमन आउन्छन् । उनीहरुलाई यहाँ अन्य मठमन्दिर रहेछन् भन्ने थाहा नहुँदा त्यहाँ नपुगी फर्केको अवस्था पनि छ । केहि मात्रमा यसरी अन्य क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिन सकियो भने हामीले यहाँ उनीहरुलाई राऋन सक्छौं । उनीहरुले अन्य पाहनुहरुलाई निमन्त्रण गर्दछन् । अनि पर्यटन मैत्री वडा सहितको हाम्रो जिल्ला वन्न खासै समय लाग्दैन जस्तो लागेर हालमा यो काम भएको हो ।
२.पर्यटकलाई केहि दिन राख्न सक्ने आधार हुनु प¥यो नि ?
– मैले भने नि पर्यटकहरुलाई राख्ने सक्ने आधार नै यहाँको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको उनीहरुलाई जानकारी दिनु हो । यहाँ नेपालकै अग्लो र लामो कुस्मा ज्ञादी झोलुङ्गे पुल,वडागाउँ मडिकुवा झोलुङ्गे पुल, वडागाउँ वलेवा मडिकुवा झोलुङ्ग पुल सहित निमार्णधिन बञ्जी जम्प खेल,कुस्मा वलेवा यान्त्रीक पुल,गुप्तेश्प। गुफा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र तथा धार्मिक मठ मन्दिर रहेका छन् । ती क्षेत्रमा जाने आउँने मात्र त हुदैन् । उनीहरु मानौ अग्ला पुल अवलोकन सहित रमाउन ,फोटो ससेन गर्न त १ दिन मात्रै पर्यात हुन्न । तसर्थ,उनीहरुलाई २÷३ दिने पुलको अवलोकन घुमघाममा खर्चनु पर्छ । अन्य दिन दिन धार्मिक स्थलको अवलोकन सहित घुमघाममा व्यतित गर्दा हप्ता दिन लागि हाल्छ । हप्ता दिन सम्म पर्वतमा बिताउँदा उनीहरुलाई आवश्यक किराना,कपडा लगायतका अन्य आवश्यक समाग्रिहरु खरिद् गर्छन । त्यसले व्यापारीको व्यापारमा पनि टेवा पुग्छ ।
३.पर्यटक भित्राउने कामले मात्रै यो वडा समिद्ध होला त ?
– अवश्य वनाउँन सकिन्छ । तथापी ,यसमा मात्रै केन्द्रित भईन्छ भन्ने पनि छैन । यहाँका अन्य गतिविधीहरु जस्तै महिलादिदि वहिनी दाजुभाईहरुले स्वयंम आत्मानिर्भर वन्न थालेका कार्यहरु पनि हामीले गर्छौ । यदी पर्यटकको जिल्ला वनाउँन सक्यौ भने वडा नम्बर ५ को मात्रै विकास होइन । समर्ग जिल्लाभरका नागरिकहरुको आर्यस्रोत बढाउन सकिन्छ । उनीहरुले अहिले कुस्माको व्यापारमा गीरावट आयो भनिरहेका छन् । यो भयो भने व्यापार पनि वड्छ । आम्दानी गर्दै आत्मानिर्भर बनछन् ।
४.महिला वडाअध्यक्ष कार्य सम्पादन गर्न ग्राहो छ ?
– त्यस्तो छैन् । यहाँका सवै महिला पुरुषहरुको साथ र सहयोग छ मलाई । हामीले उहाँहरुलाई के के गर्नुप¥यो भन्दै घरदैलो पनि चलायौं । आवश्यक मागहरु चाहेको खण्डमा वडाकार्यालयमा आउँछन् । अनुगमन गर्दै बिस्तारै माग र आवश्यकता आधाारमा पुर्ति गछौं । पुरुषहरुको सुझाव सल्लाह र मागका आधारमा कामहरु गर्दछौं । केहि हस्तक्षेप र असहयोग भएको छैन् र हुन्न पनि ।
५.अन्यमा वडावासीलाई तँपाईको भनाई ?
– पहिला म वडाअध्यक्ष भएको कारण आवश्यक कामहरु माग र आवश्यकताको आधारमा अवलोकन र अध्यान्न गर्दै अगाडी वढाउँछ । यहाँका शैक्षिक क्षेत्रको सुधार स्तरउन्नित,दलित महिलाको आर्यआर्जन वढाउन प्रयत्नशिल छौं । युवाहरुलाई पनि उद्यमसिलता तर्फ लाने लगायतका सामाजिक कामहरुमा वडा निकै प्रयासरत्त छ । एकै पटक भएा भन्दा पनि विस्तारै कामहरु गर्दै जान्छौं अनि मागहरु पुरा गर्छौ भन्छु । अझ बिषेश गरेर पर्यटक र धार्मिक स्थलहरु प्राय हाम्रो वडामा पर्दछन् । यीनको प्रचारप्रसारमा सवै आआफ्नो ठाउँवाट लागौं भन्ने हो । हामी पनि यो काममा लागि रहेका छौं । थप,सहयोगका लागि नगरपालिका सम्क्ष पनि हाम्रो वडा माग गर्दछ । र ,अन्तयमा गण्डकी प्रदेश भरिकै सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका समाधानलाई मेरो कुरा आम जनता माझ पु¥याउने प्रयास गरिदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछु ।